कडा नाडीको घर प्रयोग र लेजर कपाल हटाउने उपकरण - टेक्निकल जानकारी शेन्जेन नो स्मार्ट स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी सीमित बीच भिन्नता।
कडा नाडी घर प्रयोग र लेजर कपाल हटाउने उपकरण बीच भिन्नता
समय: 2019-09-19 हिट्स: 132
सेन्सेन नोबलसँगै आउनुहोस् कडा नाडीको घर प्रयोग वा लेजर कपाल हटाउने सिद्धान्तको बारेमा कुरा गर्न। दुबै समान छन्।
अप्टिकल कपाल हटाउने प्राय: सबै लक्ष्यहरू कपालका फोलिकहरू हुन्। कपालको फोलिकुलहरूमा मेलेनिन हुन्छ। प्रकाशको खास तरंग दैर्खाहरुको अवशोषण पछि, मेलानिन तातो हुन्छ र विस्फोट हुन्छ, यसैले कपालको फुलहरू नष्ट हुन्छ। फुत्के पछि मेलानिन शरीर को चयापचय संग उत्सर्जित हुनेछ।
त्यसकारण, सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त गर्नका लागि उत्तम हुन्छ जब कपालको कपालमा मेलानिन सबैभन्दा बढी हुन्छ ताकि कपालको फोलिकुल सजिलै नष्ट हुन्छ। कपालको फोलिकुलमा सबैभन्दा बढी मेलेनिन कहिले हुन्छ? वृद्धि प्रक्रिया, वृद्धि अवधि, रिग्रेशन अवधि र बाँकी अवधिमा कपाललाई तीन चक्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ। विकास अवधिमा, कपालको फोलिकल्सले मेलानिनको ठूलो मात्रा उत्पादन गर्दछ, ताकि तपाईं कपाल हटाउन अघि २- days दिन अघि क्षेत्र भत्काउन सक्नुहुन्छ।
अब अप्टिकल कपाल हटाउने उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् जुन हालै बजारमा लोकप्रिय छ।
१. तीव्र स्पन्दित कपाल हटाउने तीव्र स्पन्दित प्रकाश
कलर लाइट कपाल हटाउने पनि भनिन्छ, आईपीएलको रूपमा चिनिन्छ। कडा नाडी घर प्रयुक्त प्रकाश अप्टिकल कपाल हटाउने प्रविधि मा नेता हो। यसको द्वारा उत्सर्जित प्रकाश निश्चित तरंगदैर्ध्यमा प्रकाश हो। बजारमा लोकप्रिय फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड 640-900nm, 640-1200nm हो, र भिन्नता ठूलो छैन। किनकि यो एक स्थिर तरंगदैर्ध्य होईन, उपचारको प्रक्रियाको क्रममा यसको प्रबुद्ध प्रक्रियाको क्रममा ऊर्जा बिस्तारै कम हुन्छ। लेजर कपाल हटाउन एक स्थिर तरंग दैर्ध्य छ, त्यसैले एक प्रबुद्ध प्रक्रिया को ऊर्जा अपरिवर्तित रहन्छ। यो दुई प्रविधि बीचको सबैभन्दा ठूलो भिन्नता हो। म यसलाई पछि परिचय गराउनेछु। यो सटीक छ यस कारणले कि स्पन्दित प्रकाश प्रकाश र color्ग कपालको र treat्गको उपचारको लागि उपयुक्त छैन।
वर्तमानमा, शेन्ज़ेन नोबल प्लेटिनमको धेरै घरेलु घर प्रयोग आईपल कपाल हटाउने उपकरणहरू कडा नाडी प्रकाश प्रविधिमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू मिनी, पोर्टेबल, स्थायी प्रयोग, पीडा रहित कपाल हटाउने, घर सुरक्षा, आराम आश्वस्त देखिन्छन्। प्रकाशको जीवन लामो छ, र कपाल हटाउन चिरस्थायी छ। यो स worth्कलन गर्न लायक छ।
२. लेजर कपाल हटाउने
यो दायरा धेरै फराकिलो छ। आउनुहोस् पहिले बजारमा केहि लोकप्रिय लेजर कपाल हटाउने प्रविधिहरूको सूची बनाऔं।
a पन्ना लेजर, अलेक्सान्ड्राइट लेजर भनेर पनि चिनिन्छ, तरंगदैर्ध्य 755 XNUMX एनएम हुन्छ।
b अर्धचालक लेजर (डायोड लेजर), सामान्य तरंगदैर्ध्य 808०810nm वा XNUMX१०nm हो।
c १०1064 एनएमको तरंगदैर्खेको साथ लामो पल्स लेजर।
घरेलु ब्यूटी सैलुन प्लास्टिक सर्जरी अस्पतालहरू हुन्। अधिक सामान्य रूपमा प्रयोग हुने अलेक्ज्याण्डर लेजरहरू वा सेमीकन्डक्टर लेजरहरू हुन्। तिनीहरूको निश्चित तरंगदैर्ध्य र उच्च उर्जाको कारण, लेजरहरूले कपालको स्थायी कपाल हटाउने सबै प्रकारको उपचारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। तर यसको कारणले, यसको उपचार मूल्य स्पन्दित प्रकाश उपचार भन्दा धेरै बढी छ।
वास्तवमा, यो मजबूत नब्ज घर प्रयोग प्रकाश वा लेजर हो कि, प्रभाव एशियाईहरु को लागी धेरै आशावादी छ। यसले स्थायी कपाल हटाउन प्राप्त गर्न सक्छ। लागत प्रभावी, व्यक्तिगत कडा नाडी घर प्रयोग कपाल हटाउन को सिफारिश।
अन्तमा, शेन्जेन नोबेललाई न्यानो रिमाइन्डर गरौं, सबैजना, के समस्या पछि उपचार पछि ध्यान दिन, वा अन्यथा रंग हुनेछ।
१. जलनयुक्त पेय (चिया, कफी) पिउनुहुन्न।
२. भारी स्वादहरू (मिर्च, सिरका, सोया सॉस) नखोज्नुहोस्, हल्का हुन कोशिस गर्नुहोस्
Sun. सनस्क्रीनमा ध्यान दिनुहोस्। प्रसाधन सामग्री पनि सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ।
Plenty. प्रशस्त पानी पिउनुहोस्।
अघिल्लो: केहि चीजहरू तपाईले घर ipl कपाल हटाउन अघि यो जान्नु आवश्यक छ （Next）
अर्को: के घर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण स्थायी कपाल हटाउन वास्तवमै सक्षम छ? - नोबेल इनोवेशन